Ihe niile ị na kwesịrị ịma banyere iPhone ndabere paswọọdụ
Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Banyere iPhone ndabere paswọọdụ.
Anyị niile mara otú faịlụ nche dị mkpa na nke ahụ bụ karịsịa ọ bụrụ na ọ na-abịa iPhone azụ elu nche. Chee echiche nke ya otú a, gị azụ elu e dere ozi dị mkpa dị ka kọntaktị, SMS mkparịta ụka, ekwentị dekọọ, ozi nbanye ka Accounts, Edeturu, ozi ịntanetị na ọtụtụ ndị ọzọ mwute ozi. Nke a bụ iji na-egosi na ihe ọmụma dị otú kwesịrị mgbe niile-echebe site n'aka ndị ọzọ, ọbụna mgbe ha na-echekwara na ndabere. Isiokwu a ga-enye gị ozi na mkpa ka ị mara banyere iPhone ndabere nchebe na icheta mgbe ọ bụla e nwere nsogbu na okwuntughe.
Configuring a ndabere Paswọdu
Nzọụkwụ mbụ bụ na-a peek na otú i nwere ike encrypt gị iPhone ndabere faịlụ. The mma na izo ya ezo usoro bụ na ọ bụ dịtụ mfe na-eso na mejuputa. The usoro bụkwa edo na ma Mac na Windows kọmputa. Encrypt gị azụ faịlụ, jikọọ gị iPhone na iji eriri USB mgbe ahụ ẹkedori gị iTunes ngwa. Lelee gị iTunes sidebar na-ahọrọ iPhone. Pịa na Summary taabụ ma chọta Nhọrọ.
Họrọ igbe dere encrypt iPhone ndabere. A igbe ga-gbapụta apostle gị ịbanye a paswọọdụ.
Dị ka na-atụ anya na izo ya ezo Usoro e ji mee nke a bụ ezigbo ike ịgbawa N'ihi ya, ọ bụ ihe amamihe na-elekọta paswọọdụ gị. Ọ bụrụ na i furu efu gị iphone ndabere paswọọdụ mgbe ahụ e nwere ụzọ ụfọdụ ị pụrụ iji inweta ohere ka gị ndabere.
1. Jihosoft iTunes ndabere Unlocker
Ngwá ọrụ a bụ otu nke kasị mma esighịkwa ya multidimensional decryption nkata. The software e mere na-agbaji izo ya ezo iji atọ ikenyeneke mbiet paswọọdụ ọgụ nhọrọ. Iji jiri ngwá ọrụ a ị nwere ike ibudata ngosi na-agbalị ya ma i nwere ike ịzụta ya iji nweta ezigbo results. The ukara download saịtị bụ http://www.jihosoft.com/itunes. Mgbe nbudata, ị ga-awụnye software na ẹkedori ya. On launching, software ga-akpaghị aka ịchọpụta gị ndabere faịlụ na kọmputa gị. Họrọ onye ndị chọrọ ka decrypt.
Nzọụkwụ ọzọ bụ na-ahọrọ ụdị paswọọdụ agha ị na-eche ga-dabara ọnọdụ gị. Ọ bụrụ na ị na-enweghị aidia, họrọ arụrụala-ike Mmegide. Bụrụ na ị maara paswọọdụ ikpe, na-eji arụrụala-ike na Nkpuchi Mmegide ma ọ bụ Dictionary Mmegide.
Mgbe ị na-ahọrọ ihe ị chọrọ, pịa Next ma họrọ Malite na-amalite paswọọdụ mgbake. Chere maka usoro chupu na paswọọdụ na ị ga-paswọọdụ.
Ọ na-enye atọ paswọọdụ decryption nhọrọ
Ọ nwere ezi ọrụ interface
Ọ bụ a bit ngwa ngwa
2. Ternoshare iPhone ndabere Unlocker
A bụ ihe ọzọ iphone ndabere paswọọdụ mgbake software na awade ọrụ atọ nhọrọ na a ikele decrypt echefu okwuntughe. The software bụkwa free download ma nwere ike zụta n'ihi na otu onye ka ịnweta zuru atụmatụ. Iji nke a software Ị nwere ibudata na wụnye software mbụ. The download njikọ bụ http://www.tenorshare.com/products/iphone-backup-unlocker.html
Mgbe echichi, ẹkedori software wee pịa na tinye na interface. The ngwá ọrụ ga-akpaghị aka chọta nkwado ndabere na mpaghara faịlụ.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ ị ga-mkpa mbubata ndabere faịlụ. The software nakwa awade ụzọ atọ nke na-paswọọdụ gị: arụrụala-ike Mmegide, Nkpuchi Mmegide, ma ọ bụ Dictionary Mmegide.
Họrọ mbụ nhọrọ wee pịa Malite. The software ga na-agbalị niile kwere omume paswọọdụ n'ịgwa mgbe ahụ na-enye gị paswọọdụ mgbe a nkeji ole na ole.
Ọ na-enye dịgasị iche iche nke paswọọdụ ọgụ
O nwere ike ịbụ a bit ngwa ngwa
3. iSumsoft iTunes Paswọdu Refixer Naghachi iTunes ndabere paswọọdụ na iPhone / iPad / iPod
Nke a bụ software na naputa echefu okwuntughe na fọrọ nke nta ọ bụla version nke iPhone gbakwunyere iPad na iPod ngwaọrụ. The software-arụ ọrụ na windows sistemụ. The software nwere ike ibudata site http://www.isumsoft.com. Ozugbo arụnyere,-agba ọsọ ahụ software na pịa Open na họrọ ndabere faịlụ site na faịlụ Explorer. Wee pịa OK. Ịnwere ike iji aka ịgbakwunye faịlụ site na iji nhọrọ Add File.
Họrọ agha ụdị ị chọrọ site na nhọrọ: arụrụala-n'ọrụ, Nkpuchi, Dictionary Mmegide, na Smart Mmegide. Họrọ Smart agha ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ihe ọ bụla aidia na paswọọdụ i nwere. Ịhọrọ ntọala nyere agha ị na-ahọrọ na pịa Malite naghachi paswọọdụ.
Ọ na-enye anọ paswọọdụ ọgụ
Ọ na-arụ ọrụ windows naanị
> Resource> iPhone> Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Banyere iPhone ndabere paswọọdụ.